Caalamka Oo Hadal-haya Madaxweyne kuxigeen Dal Faqri ah kasoo Jeeda 50-Kun$ Habeenkii ku Seexday Hotel. – Awdalmedia
Warbaahinta Caalamka ayaa hadal heysa nolosha iyo fataalnimada Madaxweyne kuxigeenka dalka Equatorial Guinea Teodorin Nguema Obiang, oo dalxiis iyo fasax ku qaadanaya hotel qaali ah oo kuyaala jaziirada Maldives .
Muuqaalo lasoo duubay ayaa laga dhax arkayay Teodorin Nguema Obiang, oo kaligiis ku raaxeesanaya xeeb sidoo kale nasiino ku qaadanaya hotel qaali ah oo habeenkii lagu seexdo lacag gaareysa $50,000 .
Wiilkan Madaxweyne kuxigeenka ah sidoo kale aabihiis mudo 41-sano Madaxweyne ka yahay Equatorial Guinea ayaa hotelkan qaaliga ah degan tan iyo horaantii bishan uu soo degay sida lagu qoray BBC-da.
Hantiilahan waqtiga u hiiliyay ayaa baabuurta iyo guryaha qaaliga ah uu leeyahay inta badan ku faana kuna soo bandhiga baraha bulshada, waxaana horey hanti qaali ah uu lahaa la wareegay dowlado kuyaala caalamka oo ku eedeeyay musuq maasuq.
Dalka Equatorial Guinea ayaa inta badan dadka kunool 70% yihiin dad saboolnimo kunool, waxaana dalkaasi mudo 41-sano ah Madaxweyne ka ah Teodoro Obiang Nguema Mbasogo , halka wiilkiisana uu ka dhigtay Madaxweyne kuxigeen.